Yan Aung: 2012
Posted By Yan 27 Comments
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘလော့ဂ်ဒိုမိန်းကို Renew လုပ်တာမှာ အဆင်မပြေတာလေးတွေ ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။
ဖြစ်ပုံအကြောင်းစုံကတော့ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Hosting Site ကနေ နောက်တစ်ခုကို ကျွန်တော်ပြောင်းသုံးလိုက်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Primary Domain နာမည်ကိုလည်း ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ Hosting Site နှစ်ခုထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်လို့ ဖြစ်ကုန်မှန်းကို မသိတော့ဘဲ ရှုပ်ယှက်တွေခတ်ကုန်ပါတော့တယ်။
ဒါကြောင့်မို့ လောလောဆယ် www.yanaung.net ထဲ ၀င်လာသူတွေကို www.yanaung.blogspot.com ကိုပဲ ပြန်ပြီး လွှဲပြောင်းပေးထားပါတယ်။
တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ရေခဲငှက်ဆိုတဲ့ ကလောင်နာမည်အတွက် ၀က်ဘ်ဆိုက်လေးတစ်ခု ခွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။
Wordpress အတွေ့အကြုံလေးတွေ လေ့လာအသုံးချချင်လို့ ဒီဆိုက်လေးကိုတော့ Wordpress Platform နဲ့ ရေးထားပါတယ်။
စာတွေကို တတ်နိုင်သလောက် အချိန်လေးပေးပြီး ရေးနိုင်အောင် ကြိုးစားသွားပါမယ်..
သွားတွေက ကျိုးတို့ကျဲတဲ ဖြစ်နေခဲ့လည်း
အမေအိုရဲ့ အပြုံးတွေက သန့်စင်တယ်…
လက်ဖ၀ါးမှာ နံ့သာလိမ်းခြယ် မထားခဲ့လည်း
အမေအိုရဲ့ လက်ခုပ်သံ ရင်ထဲကလာတယ်…
"NLD နိုင်ပြီ"ဆိုတဲ့ ၀မ်းမြောက်စိတ်နဲ့ အမေအို ကတယ်…
ကျွန်တော် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စလေးတစ်ခုကြောင့် ဘလော့ဂ်ကို ခေတ္တပိတ်ထားခဲ့တာပါ.
အားလုံးကို ကြိုတင်အသိမပေးခဲ့မိတဲ့အတွက် ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး.
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါလို့ ကြိုဆိုရင်း ကျွန်တော်ဘလော့ဂ်လေးကို ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်.
Menu Bar မှာ တင်ပေးထားတဲ့ BloggerHelpDesk, English4Success စတဲ့ ဘလော့ဂ်လေးတွေကိုလည်း ကျွန်တော်ပြန်ပြီး အချိန်ပေးလို့ ပို့စ်အသစ်လေးတွေ တင်ပေးသွားနိုင်အောင် ကြိုးစားသွားပါမယ်.
ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ ဘလော့ဂ်လောကကြီးရယ်၊ ကျွန်တော့်ကိုချစ်တဲ့ စာဖတ်ပရိသတ် မိတ်ဆွေတွေရယ်ကို ကျွန်တော် ဘယ်သောအခါမှ စွန့်ပစ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး.
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ ခင်ဗျာ...